Inbound Marketing maka Obere Ahia | Martech Zone
Teknụzụ na-aga n'ihu na-enye obere ọrụ ohere dị egwu. Dika nghazi ike na nyiwe na-aga n’ihu, onu ogugu n’aga n’iru idowe. Afọ ole na ole gara aga, nyocha na ngwa ọrụ mmekọrịta mmadụ dị ọtụtụ puku dollar kwa ọnwa ma naanị maka ụlọ ọrụ ndị nwere ike itinye ego ha. Echi m ga-agwa otu ndị otu obere ndị ọchụnta ego banyere ngwaọrụ iji nyere ha aka na Oke bụ otu n'ime ngwaọrụ dị n'elu ndepụta m.
Oke Powered by their Pathway ™ ikpo okwu. Athzọ ™ na-enyocha ọhụụ nke azụmahịa gị n'ịntanetị, ma na-enye usoro dị mfe, nke usoro iji bulie ngosipụta gị n'ịntanetị site na njikarịcha search engine, njikwa aha, ịde blọgụ, na nchịkọta mpaghara.
Oke bụ sọftụwia SEO siri ike na usoro agụmakwụkwọ na-enye gị ịkọ akụkọ na nghọta na usoro ịzọ ọkwa iji duzie gị ịga nke ọma ịre ahịa ịntanetị.
Njikarịcha weebụsaịtị - Ebuli gị na ebe nrụọrụ weebụ nke ndị ahịa na mbụ na search engines abụọ.
Mpaghara njikarịcha - Gbalia ihu na inwere ihe edeputara ma dicha nke oma na saiti mpaghara dika Google+ Local, Yelp na otutu ndi ozo.
Mgbasa ozi gbasara mgbasa ozi - Mepụta ọnụnọ na saịtị mgbasa ozi dị ka Twitter na LinkedIn ma mụta otu esi eji ha n'ịmepụta ndu.
Njikwa nchịkwa - Ghọta ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasara azụmaahịa gị yana asọmpi gị na saịtị nyocha yana na soshal midia ma zaghachi ya.
ịde blọgụ - Mụta otu ịde blọgụ nwere ike isi nwee mmetụta dị egwu na ntanetị gị na ntanetị yana ụfọdụ isi ihe ntanetị.
Tags: ịde blọgụnjikarịcha mpagharanchọta mpagharanjikarịcha ọchụchọ mpagharaobodo seonjikwa ahaelekọta mmadụ medianjikarịcha mgbasa ozi mmekọrịtanjikarịcha weebụsaịtị